Sithe lapho sifika ekhaya umkami nami safunda iziqephu ezwini likaNkulunkulu ndawonye: “Abantu abaningi kakhulu bathatha imibhalo ngemisebenzi kaNkulunkulu kanye namazwi Akhe ngenkathi yeTestamente Elidala njengezinsomi nezinganekwane. Ezinhliziyweni zabo abantu baphenduka bangabinandaba nesithunzi nobukhulu bukaNkulunkulu, nemfundiso ethi uNkulunkulu ukhona futhi uyabusa phezu konke. Ukuphila kwesintu nesiphetho samazwe nezizwe akusabalulekile kubo. Umuntu uphila ezweni elingenalutho ezikhathaza kuphela ngokudla, ukuphuza nokushisekela intokozo.… Bambalwa abantu abazihluphayo ngokufuna ukwazi lapho uNkulunkulu enza khona umsebenzi Wakhe namhlanje, noma ukufuna ukuthi usengamela kanjani futhi usihlela kanjani isiphetho somuntu” (“UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Lowo okhula njalo kakhulu. Uma abantu bebheka umhlaba, izinhliziyo zabo zidonsekela kuwo, futhi abaningi abakwazi ukuzehlukanisa nawo….Uma ningaphokopheleli inqubekela phambili, futhi ningenamibono, nizothathwa yileli gagasi lesono” (“Isenzo (2)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu uSomandla enza ingqikithi yezindlela zaleli lizwe zibe sobala futhi zicace. Izindlela zomhlaba zinguSathane nje edukisa umuntu futhi efuna ukumenza onakale. Zingamacebo nje namaqhinga okuhloswe ngawo ukusobozela umuntu. USathane usebenzisa nje ukudla, ukuphuza, ukufuna injabulo nezinye izinto ezifunwa yinyama ukuba adukise futhi abophe umuntu. Uma inhliziyo yomuntu seyibanjwe yilezi zinto ezingokwenyama angeke esakwazi ukufuna izinto ezinhle, futhi uzoya ngokuya eqhelelana noNkulunkulu, okuyokwenza ukuba adliwe futhi athunjwe nguSathane. Ngokufunda izwi likaNkulunkulu ngaqaphela ukuthi imibono yami ngokufuna yayingalungile ngokuphelele. Kungakhathaleki ukuthi ngikhathazeke ngani, noma ngabe ukudla, ukuphuza, ukufuna injabulo yenyama noma ukufuna impilo lapho ngingaphezu kwabanye, zonke lezi zinto ziwumphumela kaSathane ekhohlakalisa abantu. Sengikufakazelisile lokhu ngokubuka engihlangene nakho ukuthi uma umuntu efuna lezi zinto ezingezikaSathane uzoba nobubi ngokwengeziwe, futhi aye ngokuya edlebeleka futhi egcwala inkohlakalo. Kuzovele nje kunezele ebugovini bakhe, ekuzicabangekeni kwakhe, ebubini nasenkohlakalweni yakhe. Uyobe ephila esonweni, futhi uyophelelwa ubuntu obujwayelekile. Ngisho noma umuntu ejabulela lezi zinto kakhulu ngokwengeziwe, ngisho noma umuntu ethola lezi zinto ngokwengeziwe, ekugcineni, uyolokhu enesikhala esikhulu esingenalutho enhliziyweni. Uma umuntu enazo zonke lezi zinto kodwa engakafiki phambi kukaNkulunkulu, impilo iyolokhu iyize, futhi ingabi nakubaluleka noma ubugugu. Kungokuza phambi kukaNkulunkulu kuphela nokukholwa kuNkulunkulu nokukhonza uNkulunkulu kuphela lapho umuntu ezobe ehamba indlela yempilo efanele, futhi kulapho kuphela lapho umuntu eyozikhulula khona ekuphileni okungenalutho nobubi. Ngakho, nganquma ukuguquka indlela engiphila ngayo impilo yami bese ngihamba endleleni efanele yokuphila.
Iposi “Lejuba” Ukukhanya Kufudumele Uma Udlula Emhubheni Ukuhlangana neNkosi Futhi Ngaloluya Suku Isibhakabhaka Sasicace Futhi Sinelanga Ngokukhethekile